Indlela Yokukhipha Idatha Kuwebhusayithi Ye-Python & I-BeautifulSoup? - I-Semalt Answer
A ithuluzi lewebhu ifomethi eyingqayizivele ukusiza abashayi bewebhu ukuba bafike ngemiphumela abayidingayo. Inenamba yezicelo emakethe yezezimali, kodwa ingasetshenziswa kwezinye izimo. Isibonelo, abaphathi bayisebenzisela ukuqhathanisa amanani wemikhiqizo ehlukene - lipikar podologics precio.
I-Web Scraping ne-Python
I-Python iyilimi oluhle lokuhlela nge-syntax enkulu nekhodi efundekayo. Kuyafaneleka ngisho nabaqalayo ngoba kunezinhlobonhlobo eziningi ongakhetha kuzo. Ngaphandle kwalokho, i-Python isebenzisa ilabhulali eyingqayizivele ebizwa ngokuthi i-Soup Beautiful. Amawebhusayithi abhaliwe esebenzisa i-HTML, okwenza ikhasi lewebhu libe nedokhumenti ehleliwe. Noma kunjalo, abasebenzisi kudingeka bakhumbule ukuthi amawebhusayithi ahlukahlukene awahlinzeki ngaso sonke isikhathi okuqukethwe kwawo emafomethi akhululekile. Ngenxa yalokho, ukukhwa kwewebhu kubonakala sengathi kuyindlela ephumelelayo futhi ewusizo. Eqinisweni, linikeza abasebenzisi ithuba lokwenza izinto ezihlukahlukene ababezijwayele ukuzenza nge-Microsoft Word.
I-LXML & Isicelo
I-LXML yilabhulali enkulu engasetshenziselwa ukuphazamisa imibhalo ye-HTML ne-XML ngokushesha. Eqinisweni, umtapo weLXML unikeza ithuba kubaseshi bewebhu ukwenza izakhi zomuthi ezingase ziqondwe kalula ngokusebenzisa i-XPath. Ngokuqondile, I-XPath iqukethe lonke ulwazi oluwusizo. Isibonelo, uma abasebenzisi befuna nje ukukhipha izihloko zamasayithi athile, badinga kuqala ukuthola ukuthi yiluphi uhlobo lwe-HTML oluhlala kuwo.
Abaqalayo bangathola kunzima ukubhala amakhodi. Ngezilimi zokuhlela, abasebenzisi kumele babhale ngisho nemisebenzi eyisisekelo kakhulu. Ukuze uthole imisebenzi eyengeziwe, abaseshi bewebhu kumele benze izakhiwo zabo zedatha. Noma kunjalo, i-Python ingaba usizo olukhulu kakhulu kubo, ngoba lapho besisebenzisa, akudingeki ukuthi baqonde noma yisiphi isakhiwo sedatha, ngoba le nkundla inikeza amathuluzi ahlukile abasebenzisi bayo ukwenza imisebenzi yabo.
Ukukhipha ikhasi lewebhu lonke, badinga ukulanda ngokusebenzisa ilabhulali yezicelo zePython. Ngenxa yalokho, umtapo wolwazi uzolanda okuqukethwe kwe-HTML kusuka kwamakhasi athile. Abaseshi bewebhu bafuna ukukhumbula ukuthi kunezinhlobo ezahlukene zezicelo.
Imithetho Yokukhwabanisa Kwama-Python
Ngaphambi kokukhipha amawebusayithi, abasebenzisi kudingeka bafunde amakhasi abo wemigomo nemibandela ukuze bagweme noma yiziphi izinkinga zomthetho esikhathini esizayo. Isibonelo, akusilo umqondo omuhle ukucela idatha futhi ngokufutheka. Kudingeka baqiniseke ukuthi uhlelo lwabo lufana nomuntu. Isicelo esisodwa sekhasi elilodwa ngomzuzwana kuyindlela enhle.
Lapho uvakashela amasayithi ahlukene, abaseshi bewebhu kumele bahlale bebheke izakhiwo zabo ngoba bashintsha ngezikhathi ezithile. Ngakho-ke, kudingeka bavakashele isayithi elifanayo futhi babhale kabusha amakhodi abo uma kunesidingo.
Ukuthola nokuthatha idatha ngaphandle kwe-intanethi kungaba ngumsebenzi onzima futhi i-Python ingenza le nqubo ibe lula njengoba ingase ibe.